Ciidamo loogu tala galay ilaalinta madaxda DKMG oo tababar loo soo xiray+Sawiro – SBC
Ciidamo loogu tala galay ilaalinta madaxda DKMG oo tababar loo soo xiray+Sawiro
Posted by editor on October 23, 2011 Comments
Ciidamo ka tirsan dawlada KMG Soomaaliya oo tababar mudo 120 maalmood ah uga socdey xerada ciidamada Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa tababarkaasi loo soo gabagabeeyey.
Ciidamadan tababarka loo soo xiray ayaa waxaa ka mid ah 54 askari oo si gaar ah loogu tababaray ilaalinta madaxda dawlada KMG Soomaaliya, halka inta kalena ay ku biirayaan qaybaha ciidamada.
Tababarka ciidamadan la siiyey oo ay bixinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM gaar ahaan kuwa Ugandha ayaa waxaa ka mid ah habka dagaalka, isdifaaca iyo qibrado kale oo la xiriira dhanka ciidamada.
Ciidamada tababarka loo soo xirey ayaa halkaasi ku soo bandhigay dhoolatus kooban oo ku aadan inay muujiyaan wixii ay barteen gaar ahaan habka loo ilaaliyo masuuliyiinta iyo waliba sida loo yareeyo khasaaraha ciidamada xiliyada dagaalka.
Tababarkan loo soo xiray ciidamada ayaa waxaa ka soo qayb galey Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Cadbiwali Maxamed Cali (Gaas), isagoo hadal uu halkaasi ka jeediyey uu ku xusey in talaabadan ay qayb ka tahay dadaal xukuumadiisu ku doonayso dhismaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay ciidamada tababarka qaatey inay kaalintooda ka qaataan qorshaha dib u soo celinta amaanka dalka.
Tababarka la siiyay Ciidamadaan cusub ayaa waxa uu socday muddo 4-bilood ah, iyadoo Xeradda Jasiira ay ciidamadaasi ku qaadanayeen tababarkaasi mudadada uu socday, iyadoo halkaasi tababarka ku siinayeen khubaro ka socota AMISOM.
Ciidamada ayaa waxyaabihii la baray waxaa ka mid ahaa oo ay soo bandhigeen mar ay samaynayeen dhoolatus ku aadan daafaca madaxda iyo yareynta khasaaraha dagaal ee soo gaari kara, iyagoo adegsanaya rasaasta aan noleyn ee rabarka loo yaqaan.
Dhinaca kale Taliyha dugsiga tababarka ciidamada ee Jasiira Col. Maxamuud Maxamed Macalin ayaa sheegay in ciidamadan & kuwa tiradoodu gaarayso 900 oo tababar loogu soo gunaanaday dalka Ugandha oo imaan doona Muqdisho maalmaha soo socda ay ka qayb qaadaan hawlaha ciidamada xooga dalka ee ay ku sugayaan amaanka wadanka.
Fanaaniinta kooxda Horseed ee ciidamada Military-ga ayaa xaflada tababarka loogu soo xiray ciidamada waxay ka qaadeen heeso wadani ah oo guubabo u ahaa ciidamada isla maraakana ay ku muujinayeen difaaca dalka.